CHI-CHI IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Chi-Chi Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chihuahua / chiChinese Crested Akasanganiswa Mhando Dzembwa
Flash Gordon wechiChinese Akabatwa Chihuahua kusanganiswa sembwanana pamwedzi mitatu- Flash iri chigadzirwa cheupfu hwehupfu Chinese Crested uye Chihuahua. Ndiye mbwanana inoyevedza chose. Zvakare, musanganiswa werudzi wakaburitsa hunhu chaihwo hunoshamisa. Anoshivirira yangu kudzikama uye kushingairira kwemwanasikana wangu wemakore gumi-gumi, vachiri kuchengetedza rudo, kutamba. Anoda kutariswa nevanhu uye dzimwe imbwa . Iye hari yakadzidziswa nyore uye iri kutodzidza yekutanga mirairo pasina kudzidziswa. Akazara nesimba, anogara akagadzirira kuenda, asi anodzikama husiku. Achavata patsoka dzangu pamubhedha usiku. Iye mufaro wechokwadi kusvika zvino uye tinotarisira kumakore mazhinji ehukama hwerudo. '
Iyo Chi-Chi haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Chihuahua uye iyo Chinese Crested . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
Flash Gordon wechiChinese Akabatwa Chihuahua musanganiswa sembwanana pamwedzi mitatu
'Uyu ndiQuinn, weChinese Crested x Chihuahua musanganiswa wembwanana. Amai vake vaive veChinese vakasungwa uye baba vake vaive maChihuahua. Vabereki vake vese vairema 8 lbs. uye iye akangogara pa1.6 lbs. mumufananidzo uyu. Iye akazvarwa mu marara e7 , vamwe vaitaridzika kunge maChihuahuas akazara, vamwe vaitaridzika saQuinn uye vaviri vaive nemhanza! Vaitaridzika kunge a Mexican Mvere , kunze kwekunge vaive epingi! Quinn ane masvondo manomwe ekuberekwa mumufananidzo uyu uye atove VANOTYA ​​kwazvo ! Anotamba zvakanaka neimwe imbwa yangu diki asi anotya saizi yakakura yembwa yedu hombe, asi ave kumujairira. Anonyanya kutamba nematoyi madiki ekatsi senge mbeva dzakazara uye mabhero-akazadzwa nemabhero nekuti iwo anongova saizi yake. Iye achiri kurara zvakanyanya, hongu, asi anokura achishingaira zuva nezuva. Ganda rake rakapfava uye huta hwake hwakanyanya kupfava. ANODA vana uye anongofarira mwanasikana wangu ane makore maviri ekuberekwa. '
Quinn iyo Chi-Chi puppy pamasvondo manomwe ekuberekwa
Spike iyo Chi-Chi (Chinese Crested / Chihuahua musanganiswa) pamwedzi mitanhatu, inorema 5.5 lbs- 'Haafanire kuwana yakawanda, kana iripo, yakakura. Imbwa huru, inoshamwaridzana uye ine simba. '
'Uyu mufananidzo wehama nehanzvadzi Chi-Chi (Chihuahua / Chinese Crested musanganiswa) vana pavhiki matanhatu ekuberekwa. Ikoko baba vaive nehupfu hwekuputa Chinese Crested uye varipo amai vaive Chihuahua. Parizvino, ivo vanoda kutitevera isu pese pese pamba uye vanotamba kwazvo. Ivo vaviri vanofarira kubatwa uye vanofarira kuve pamakumbo anodziya. '
Mukoma nemunin'ina Chi-Chi (Chihuahua / Chinese Crested musanganiswa) vana vane mavhiki matanhatu
american blackmouth cur vafudzi musangano
jack russell terrier mini pinscher musanganiswa
Australia mufudzi webhuruu heeler muganho collie musanganiswa
yakakura sei bichon frize
chiJerimani bvudzi pfupi rebhu musanganiswa
chihuahua uye maltese musanganiswa mifananidzo
dema uye tan belgian malinois
imbwa dzinorema mapaundi makumi maviri